Kaddib qirashada dilka Khashuuqji 4 qodob oo aysan jawaab u heli karin Sucuudiga & reer Galbeedka oo ku khasban inay laba daran mid doortaan!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Kaddib qirashada dilka Khashuuqji 4 qodob oo aysan jawaab u heli karin...
Kaddib qirashada dilka Khashuuqji 4 qodob oo aysan jawaab u heli karin Sucuudiga & reer Galbeedka oo ku khasban inay laba daran mid doortaan!!
(Hadalsame) 20 Okt 2018 – Aal Sacuud laba toddobaad bay been foolanayeen, dabadeed wax dhaleen “Khaajuqji waannu dilnay laakiin ogaan u ma aannu dilin”. Waa ay og yihiin in aanay jirin cid rumaysanaysaa, laakiin wax ay ku khasban yihiin in ay wax uun sheegaan. Haddii aanay ninka ogaan u dilin oo ogaan u qalan maxay ka ga jawaabayaan:
1. Ninku qunsuliyadda ayuu idiinku jiray oo kolleyba idinka ma baxsan kareen ee maxaa dilka keenay?
2. Haddii qabasho iyo afduubid keliya dantiinnu ahayd, ma 15 askari oo tababaran baa si fudud u qaban kari waayay oo u xidhxidhi kari waayay?
3. Haddii aanay dadqalnimo ogaan ah idinka ahayn, maxaad maydkiisa u qariseen oo weliba u jarjarteen, sida loo badinayo, maad qunyar sharciga wargelisaan?
4. Maxaad laba toddobaad u murmayseen ee u lahaydeen ninku qunsuliyadda waqti yar buu ku jiray oo wuu ka soo baxay?
Haddii ay Aal Sacuud dhagartan eeddeeda ka baxsadaan dunidu aad iyo aad bay u sii foolxumaanaysaa. Waxaa hanjabaya oo hiil la’aan noqonaya halganka guulaynta xorriyadda fikirka iyo erayga, waxaana dhiirranaya cabbudhinta iyo dadqalnimada caynkan ah. Sidaa darteed imtixaan anshax iyo ilbaxnimo ayaa dunida hor yaalla. Gaar ahaan reer Galbeedka dhacdadani wax ay taagtay isgoys. Ma Aal Sacuud iyo lacagtooda, mise dadnimada iyo karaamada ay sheegtaan?
Previous article”Ninyohow qof wanaagsan baad tahay, laakiin waxaan ku nacay markii aad noqotay QABIIL kale!”
Next article”Bishii waxaan qaataa $300 oo doollar oo qura!” – Maxay Somalia ka baran kartaa Dr Cabbeey Axmed